Software A inuu ku guuleysto at roulette la garaafyada isbeddellada
Roulette Trends Hunter waa softiweer si aad ugu guuleysato roulette online oo leh garaafyo isbeddel ah, taasi waa, waxay kuu oggolaaneysaa inaad aqoonsato fursadaha soo socda a Warku in la isku dayo in laga faa'iideysto sii socoshada.
Ku guuleysiga roulette: farqiga ama dheelitirka?
Mid ka mid ah weedhaha aan maqlay inta badan tan iyo markii aan bilaabay inaan xiiseeyo isbeddellada fursadaha roulette waa: in roulette sharciga uu yahay farqiga, dheelitirka ayaa ka reeban!
Waa fikrad ay wadaagaan ciyaartoy badan - xitaa kuwa aan runtii bilow aheyn - inuu yahay roulette bilaabaa inuu soo saaro farqiga leh fursad qaas ah, waxaa hubaal ah inay aad ugu habboon tahay sii wadida raacitaanka kuwan Warku halkii laga ciyaari lahaa taasna waxaa muujiyay shaxdii hore, halkaasoo ay ku cadahay in iyadoo la baarayo tusaale ahaan 4-taako ee fursadaha fudud, ee 16 isku darka suurtagalka ah (marka laga reebo eber sababaynta), kaliya 6 ka mid ah 37,5taan %) soo saar dheelitirnaan dhammaystiran.
Kahor intaadan sii wadin aqrinta, waxaan kugula talinayaa inaadan gabi ahaanba ciyaarin roulette software-ka, maxaa yeelay waxaa loo habeeyay si ciyaariyahanku u lumiyo, waa mashiinno afyare sidaas darteed istiraatiijiyad waliba waa wax aan waxba tarayn.
Ku guuleysiga roulette: liistada fursadaha 6
Roulette Trends Hunter, hadda nooca 4.0, waxay ilaalineysaa kala duwanaanta 6 fursadood oo iska soo horjeedda, saddex waa casaan caadi ah / Madoow, Xitaa / Odd, Manque / Passe, halka 3-da kalena ay yihiin qeyb, maxaa yeelay waxay ka walwalsan yihiin isku dubbarididda nambarada tan si looga hortago isbeddelo kasta oo laga yaabo inay ka dhashaan bilaabista croupier-ka.
Muuqaal kale oo ka mid ah dhammaan 6da fursadood ayaa ah inaanay ahayn wax la israaci karo, maadaama mid had iyo jeer ka kooban yahay 19 lambar (oo ay ugu wacan tahay ka mid noqoshada eber), kana soo horjeedda 18-ka soo hadhay ee ka soo horjeedka fursadda ah, laakiin aan si faahfaahsan u aragno:
1.Isbadal V / L = Deriska - Fog (Deriska: lambarka hadda baxay + 9ka dhinac midig / bidix ee isku mid ah; Far: 18-ka nambar ee hadhay ee giraangirta).
2.Cance A / B = Sare - Sare (Sare: eber iyo 9ka midig / bidix ee isku mid ah; Hoose: 18 lambar ee hadhay ee giraangirta)
3.Canci D / S = Midig - Bidix (Midig: laga bilaabo 0 illaa 10 oo loo dhan yahay; Bidix: 18-ka nambar ee hadhay ee giraangirta).
4.Isbadal N / R = Madow - Casaan (Madow: dhammaan lambarrada madow iyo eber; Casaan: dhammaan 18 lambar cas);
5.Fiirso P / D = Xitaa - Odd (Xitaa: xitaa xitaa lambarro iyo eber; Odd: dhammaan 18 lambar oo qariid ah);
6.Fiirso M / P = Manque - Passe (Manque: dhammaan nambarada iyo eber; Passe: dhammaan 18-ka lambar ee laga gudbo).
Ku guuleysiga roulette: ka hortagga isbeddellada
Jaleecada hore waxaay umuuqdaan waxoogaa fowdo ah, laakiin xaqiiqda kaliya waxaad u maleyneysaa inaan kormeerayno fursad roulette in la fahmo taas oo soo saareysa farqiga ugu weyn ee loo ciyaaro (ama ka soo horjeedka haddii aad doorbideyso) farqigaas.
Kaliya bilaw inaad geliso nambarada midba mar, maadaama ay ka muuqdaan shaashadda aan fiirsano.
Si aad u gasho, kaliya dhagsii rooga qeybta hoose ee barnaamijka lambarka waxaa lagu gelayaa safka joogitaanka bidix.
Xusuusnow: haddii xoogaa ay shaqeeyaan Roulette Trends Hunter isla markiiba ma cadda, kaliya saar fallaarta jiirka badhanka farriin ayaa ka muuqan doonta sharraxaadda hawsha ciyaarta u dhiganta.
Adoo u guuraya guddiga Jaantuska 'Offset' waxaad heli doontaa aragtida buuxda ee 6 naqshadeynta roulette, dhammaantood si fudud ayaa loo kala garan karaa midab kala duwan, oo si sax ah ugu habboon fursadaha kala duwan.
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad raacdo oo keliya 3da fursadood ee qaybaha, kaliya ka dooro saddexda kale adigoo gujinaya sanduuqyada hubinta ee u dhigma, garaafkuna hubaal wuu yaraan doonaa.
Labada geesood ee casaanka ah ee jaantuska jaantuska u goynaya waxay muujinayaan 'farqiga celceliska la filayo' ee ku saleysan tirada hits la duubay, halka guddiga "F + farqiga" uu muujinayo qiimaha 'farqiga ugu badan' ee laga filayo wareegga wareegga kormeerka ah.
In guddiga Diido Digniin e Warbixinta Digniinta waa suurtogal in la dejiyo digniin marka saamiga u dhexeeya farqiga hadda jira iyo midka tirakoobka ugu badan ee ku saleysan tirada wareegyada ay ka sarreeyaan qiimaha la xushay (digniinta).
Ku guuleysiga Roulette: Fursada Mashiinka
Midig ee Roulette Trends Hunter hel Mashiinka Fursadda, xulasho gaar ah oo faragalin ku sameysa kaliya tirooyinka "wadajirka ah" inta udhaxeysa 2 ama fursado badan oo aad kormeeraysid
Maxay tahay shaqadan? Haddii laba ama in ka badan oo fursado ahi isla waqtigaas soo baxaan farqiga u dhexeeya, waxaad ku khamaami kartaa oo keliya tirooyinka "wadajirka ah" ee fursadahaas halkii aad ka wada heli lahayd dhammaan 18 ama 19 lambar, sidan oo kale xitaa dhalidda hal tallaal oo aad ku guuleysatay aad ayey u sarreeysaa!
Dhinaca bidix ee barnaamijka, xagga hoose, waxaad ka heli doontaa guddiga Xawaare Ka Fiican, mahadsanid taas, kadib qaabeyn deg deg ah oo aan gadaal ka falanqeyn doono, waxaa suurtagal noqon doonta in si otomaatig ah loogu sharadyo dhamaan lambarada aad rabto hal guji oo keliya
Aynu nidhaahno kuwaani waa isla shaqooyinka ku jira barnaamijka ► Roulette Turbo Clicker, oo aad had iyo jeer ka heli karto halkan buugga softiweerka adoo adeegsanaya ThatsLuck.
Ku guuleysiga Roulette-ka oo leh Shaxan Sawirro: Wonder Wheel
Si loo sii wanaajiyo khibrada ciyaaraha, waxaan hirgaliyay midkan Wonder Wheel, kaas oo aad ka arki karto halka ay tirooyinka ku sharad gareeyaan shaagagga roulette, si looga dhigo wajiga ugu dambeeya ee tuurista mid aad u xiiso badan, marka kubaddu bilaabanto inay ka boodo inta udhaxeysa sanduuqyada ka hor inta aysan soo afjarin orodkeeda lambarka guuleysta.
Dabcan, waxaad sidoo kale go'aansan kartaa inaad u ciyaarto hakad gelinta a isbeddellada roulette, xulashada shayga Laga reebay oo loogu talagalay jawaab celin muuqaal ah iyo adigoo gujinaya badhamada kala duwan ee bet buste S o E jooga guddiga Xawaare Ka Fiican, halkaas oo aad sidoo kale ka dooran karto tirada unugyada hal lambar kasta oo aad sharad ku gasho.
Ku guuleysiga Roulette-ka oo leh Shaxan Sawirro: Monitor Trend
In guddiga Monitor Trend way suurto gal noqon doontaa, ka dib guji fudud, si aad u wada aragto dhammaan 6 garaaf isla waqtigaas, xitaa fursadahaas aad ka reebtay guddiga weyn (Scrap Graph).
Adoo gujinaya garaaf kasta oo shaqsi ah, waxay sidoo kale suurtagal noqon doontaa in la arko mid zoom Faahfaahinta hal fursad iyo cagsigeeda, had iyo jeer la xiriirta celceliska farqiga tixraaca (tusaalooyinka cas).
Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad isla markiiba yeelato aragti guud oo muhiim ah oo fursadaha bilaabmaya inay muujiyaan isbeddel ka sarreeya kuwa kale.
Tusaale ahaan, anigoo ku saleynaya sawirkii hore, waxaan shaki la'aan dooran lahaa fursadaha garaafka cagaaran (kan labaad ee xarunta ugu sareysa) iyo kuwa garaafka buluuga ah, anigoo bilaabaya inaad sharad ku sameyso lambarrada ay labada fursadood soo bandhigayaan. wadaaga (mahadsanid Chance Mixer).
Ku guuleysiga jaantusyada isbeddelka: Roogga Nasiibka
Kuwa aniga oo kale ah oo doorbida isgoysyada Mashiinka Fursadda, maaddaama xaaladdan aysan jirin lambarro badan oo lagu sharaddeeyo, waxay noqon kartaa wax aan badnayn oo loo qaabeeyo loona isticmaalo Xawaaraha Ka Wanaagsan, sidaa darteed guddiga Roogga Nasiibka waxaan awood u yeelan doonnaa inaanu ku sawirno qaabka loo dhigay rooga tirada guud (Lucky Strike) in la sharaddeeyo sidaas darteedna loo sameeyo sharadka gacanta, si dhakhso leh oo macquul ah.
Ku guuleysiga Roulette oo leh jaantusyo: Xawaare Ka Fiican
Guddiga ugu dambeeya ee barnaamijku wuxuu khuseeyaa qaabeynta Xawaare Ka Fiican kaas oo la socda shuruudo la mid ah qaabeynta barnaamijka ►Roulette Turbo Clicker.
Qeybtaan, waxaan kuugu gudbinayaa inaad aqriso qoraalka la xiriira had iyo jeer halkan ThatsLuck, halkaas oo aad ka heli doontid dhammaan faahfaahinta ku saabsan doorashadan degdegga ah iyo wixii ka sarreeya dhammaan xulashooyinka habboon, sida iska cad waxaa la fahamsan yahay in qaabeynta xawaaraha ka wanaagsan ay tahay in la sameeyo hal mar oo keliya, inta lagu guda jiro isticmaalka ugu horreeya ee barnaamijka ee barxadda cusub ee khadka tooska ah.
Talo wax ku ool ah: Roulette Trends Hunter raaca, ama halkii, iskuday inaad raacdo i Warku waxaa soo saaray roulette waad ku raadjoogtaa, sidaa darteed ma jiraan wax damaanad ah oo ah in isbeddelku aanu joogsan doonin ama ka soo horjeedayn sida aad u bilawdo tilmaamtiisa.
Sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad si dhab ah uga fiirsato ciyaar 'ku dhufo oo orod', taasi waa dhowr xabbo, laakiin si fiican loo bartilmaameedsaday.
Shakhsiyan waxaan ku qanacsanahay inaan ciyaaro 8/9 lambar oo ka dhasha iskutallaab 2 fursadood oo isku mar ah, iyadoo la adeegsanayo horumar adag oo lagu guuleysto iyadoo ujeedadu tahay inaan ku guuleysto 3 sharad oo isku xigta ka dibna lagu sharfo 1/4/16 gogo 'halkii lambar. , taas oo haddii ay dhacdo guushu u tarjunto wadar guul ah, duufaantii saddexaad ayaa guuleysatay, sifiican 576 cutub!
Waad jeceshahay Roulette Trends Hunter? Ka soo degso xiriirka ka hooseeya oo ha moogaanin fursadda ah inaad ku cusbooneysiiso daabacaadahayada, iska qor ►Kanaalka Youtube, haddii aad dhaqaajiso ogeysiisyada marwalba waa lagugu wargalin doonaa waqtiga dhabta ah ee ku saabsan dhammaan wararka softiweerka ThatsLuck.
Soo Degso Fayl	RTHunter.zip - 2 MB